Kasị elu arụmọrụ arụmọrụ ule si a PCB nzukọ china emeputa-Kingford
Ọrụ Ndozi Akwụkwọ ikike
Isiike PCB ikike
Metal PCB ikike
PCB Assembly Ngwa
PCB Ule Nyocha
Ike maka PCB ogologo
Gịnị kpatara Kingford
Kingfordawade Arụ Ọrụ Testing (FCT) na ya n'aka-isi nzukọ ọrụ. A na-arụkarị ule arụmọrụ mgbe emecharabọọdụ sekitgbakọtara ma nyocha AOI & visual visial agwụla. Nnwale mbụ na-enye anyị ohere ịchọta ma dozie ọdịda akụrụngwa, ntụpọ ọgbakọ ma ọ bụ nsogbu nwere ike ịhazi na mmalite ma mee nchọpụta nsogbu ọsọ ọsọ. N'ikpeazụ, ndị ahịa nwere ike ịnapụta ndị ahịa ha ngwaahịa zuru oke na obere oge. A na-anwale ule arụmọrụ tumadi iji zere nsogbu mgbakọ gụnyere mkpụmkpụ, mmeghe, ihe ndị na-efu ma ọ bụ ntinye nke akụkụ ndị na-ezighi ezi.
A na-enyere nyocha ọrụ aka site na ịnwale sọftụwia, nke a na-akpọkarị femụwe, yana ihe nyocha dị ka ọtụtụ ntanetị, ntinye PCB nkwurịta okwuọdụ ụgbọ mmiri, na-anwale jig na na. A na-arụ ọrụ nyocha kọmputa na-arụ ọrụ na kọmputa (FCT) site na ndị na-arụ ọrụ mgbakọule software na ihu na mpụga ngwá nyochaa ngwaọrụ n'okpuru ule.
Ihe nyocha PCBA FCT na-anwale ihe ndị a:
1. Ma voltaji na nke ugbu a na-ahụ ihe achọrọ
2. Mgbe mmemme nke MCU, ndenye ọrụ omume na-elele ma na mmepụta bụ nkịtị
3. Nlereanya ọrụ zuru ezu na njedebe mgbakọ turnkey
Site na ntuziaka ule na ngwa ngwa, Kingford nwere ike inye gị 100% FCT nnwale maka gị.
Adress: 3rd Ft, A1 Building, Fuqiao Third Industrial Mpaghara, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China
Ekwentị: + 86-18929306972
Faksị: +86 (755) 23314590
Faịlụ BOM & Gerber
Maka ọrụ Mgbakọ anyị chọrọ ndị ahịa ka ha nye BOM na faịlụ Gerber, ndị a dị mkpa iji nye ọnụahịa ziri ezi yana maka ọnụego mgbakọ nke PCB. Biko zitere anyị dị ka mgbakwunye email. sales@kingfordpcb.com
ahịa jere ozi
Gị turnkey PCB & nzukọ onye na China